Gulabo Sitabo (2020) – YANGON STYLE
ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး တစ်ခုဖြစ်လို့ မကြည့်ဘူးသေးတဲ့ သူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေး IMDB rating 6.7ရရှိထားတဲ့ Comedy/Drama အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သော Amitabh Bachchan (အမီတာဘဂျမ်း) ပါဝင် ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ကတော့ မိရ်ဇာဆိုတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့ဘေဂမ်ဆိုတဲ့သူ့မိန်းမဟာဖာတီမာနန်းတော်လို့ခေါ်တဲ့ အိမ်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးပိုင်ကြပါတယ်။ ထိုအိမ်ကြီးမှာ အိမ်ဌားနေထိုင်သူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ မိရ်ဇာသည် သူ့ဇနီးထက် အသက် ၁၇ နှစ်ငယ်သူဖြစ်ပါတယ်။ မိရ်ဇာသည် အိမ်ဌားများအား နှင်ချပြီး အိမ်ကြီးကို အပိုင်စီးချင် နေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ငှါးတွေပြဿနာအကြားအာကော်လော်ဂျီသုတေသနလုပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး…. နောက်ပိုင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ။
အိမ်ဌားတွေကရော အိမ်ပေါ်မှာ ဆက်နေခွင့်ရနိုင်ပါ့မလား…?
ဒီဇာတ်ကားကတော့ လူတွေရဲ့ အတ္တနဲ့ လောဘတွေကို ဟာသလေးတွေနှောရင်း ပညာသားပါပါပြသပေးတဲ့ ကားကောင်းလေးမလို့ လက်မလွတ်ရအောင် Link ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ မြန်မာစာတန်းထိုး Link တွေက ပျက်နေတာကြောင့် Channel Myanmar Page ကနေ Download ရယူပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ရန် Link ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Ref: BollywoodMovie, Amazon Prime Video, Channel Myanmar